यी हुन् सबैभन्दा पहिले को’रोना भा’इरस पत्ता लगाउने डा.जून अलेमेडा – Life Nepali
यी हुन् सबैभन्दा पहिले को’रोना भा’इरस पत्ता लगाउने डा.जून अलेमेडा
काठमाडौं। मानवमा कोरोना भा’इरस पत्ता लगाउने पहिलो महिला स्कटिश बस चालककी छोरी थिइन जसले १६ वर्षको उमेरमा स्कूल शिक्षा पूरा गरेकी थिइन। उनको नाम जून अलामेडा थियो, जो भाइरस इमेजिंगको क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सूचीमा आफ्नो नाम लेख्न चाहन्थिन। जूनको काम कोविड-१९ को भाइरस पत्ता लगाउने काम महामारीको समयमा छलफल भइरहेको छ र उनीको खोज छलफलको केन्द्रमा रहेको छ।
कोविड-१९ एक नयाँ भाइरस हो, तर यो उस्तै प्रकारको कोरोना भाइरस हो जुन १९६४ मा लन्डनमा सेन्ट थोमस अस्पतालमा प्रयोगशालामा डा.जून अलेमेडाले पत्ता लगाएकी थिइन। भाइरोजिस्ट डा.जून अलामेडाको जन्म सन् १९३० मा भएको थियो। उनी स्कटल्याण्डको ग्लासगो शहरको उत्तरपूर्वी भागमा बसोबास गर्ने एउटा साधारण परिवारमा जन्मिएकी थिइन। १६ वर्षको उमेरमा स्कूलको शिक्षा पूरा गरेपछि, जूनले ग्लासगो शहरको एक प्रयोगशालामा प्राविधिकको रूपमा काम गर्न शुरु गरिन। पछि उनी नयाँ सम्भावनाको खोजीमा लन्डनमा बसाइ सरिन र १९५४ मा उनले भेनेजुएला कलाकार एनरिक अलमेडासँग विवाह गरिन।
सामान्य रुधाखोकी तथा ज्वरोको अनुसन्धान
चिकित्सा क्षेत्रका लेखक जर्ज विन्टरका अनुसार विवाह भएको केही वर्ष पछि ती जोडी आफ्नो सानी छोरीसँग क्यानाडाको टोरोन्टोमा बसाइँ सरे। अलामेडाले ओन्टारियो क्यान्सर संस्थान, क्यानडामा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको मदतमा आफ्नो उत्कृष्ट कौशल विकास गरिन। यस संस्थानमा काम गर्दा, उनले यस विधिमा ज्ञान हासिल गरेका थिइन जसबाट उनलाई भाइरसको कल्पना गर्न सजिलो भयो। लेखक जर्ज विन्टरले बीबीसीलाई भनेका थिए,बेलायतले डा. जुन अलामेडाको कामको महत्त्व बुझेर १९६४ मा उनलाइ लन्डनको सेन्ट थोमस मेडिकल स्कूलमा काम गर्ने प्रस्ताव राख्यो।
यो त्यही अस्पताल हो जहाँ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई कोविड १९ बाट संक्रमित भएपछि, उपचार गरिएको थियो। क्यानडाबाट फर्केपछि डा. अलेमेडाले डा. डेभिड टायरलसँग मिली अनुसन्धान सुरु गरीन। डा. डेभिड टायरल त्यतिबेला बेलायतको सालिसबरी क्षेत्रमा त्यति रुधाखोकी तथा ज्वरोको अनुसन्धान गरिरहेका थिए। जर्ज विन्टरका अनुसार डा. टायरलले रुधाखोकीको बेला नाकका फ्लुइड (तरल बस्तु)को धेरै नमूनाहरू संकलन गरेका थिए र उनको टोलीले प्रायः सबै नमूनाहरूमा सामान्य रुधाखोकीको भाइरस भे’ट्टाएको थियो। तर यी मध्ये, बी८१४ नामको एउटा नमूना वर्ष १९६० मा बोर्डिङ स्कूलको विद्यार्थीबाट लिएको थियो, यो नमुनाहरु अरुभन्दा फरक थियो।
कसले कोरोना भाइरसको नाम दियो?
डाक्टर टायरलले सोचे , किन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर डा. जुन अलामेडाको सहयोगमा यो भाइरसको नमूना जाँच नगरौ? यो नमूना परीक्षणको लागि डा. अलेमेडालाई पठाइएको थियो, जसले परीक्षण पछि भनेका थिए कि यो भाइरस इन्फ्लूएन्जा जस्तो देखिन्छ, तर यो त्यो भा’इरस होइन, तर यो भा’इरस त्यो भन्दा केही फरक छ। र यो त्यहि भाइरस हो जुन पछि डा. जून अलेमेडाले कोरोना भा’इरसको रूपमा पहिचान गरिन।
जर्ज विन्टर भन्छन्, डाक्टर अलमेडाले वास्तवमा मुसामा हुने हेपाटाइटिस तथा कुखुरामा हने संक्रामक ब्रोन्काइटिसमा यो भा’इरसको जस्तो कणहरू देखेका थिए। विन्टरले डा. जूनको पहिलो शोध पत्रलाई अस्वीकार गर्दै भनेको थिए, उनको विश्वास थियो कि उनीहरूले इन्फ्लूएन्जा भाइरसको खराब चित्र मात्र प्र’स्तुत गरेका छन्। तर नमूना नम्बर बी ८१४ बाट यो नयाँ आविष्कार सन १९६५ मा प्र’काशित ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्र’काशित भयो र दुई वर्ष पछि उक्त फोटोसहित जर्नल अफ जनरल भाइरोलजीमा प्रकाशित भयो।
जर्ज विन्टरका अनुसार, डाक्टर टायरल, डाक्टर अलमेडा र सेन्ट थोमस मेडिकल इन्स्टिच्यूटका प्राध्यापक टोनी वाटरसन थिए जसले यो भा’इरसलाई को’रोना भाइ’रस भन्ने नाम दिएका थिए। पछि, डा. अलेमेडा लन्डनको स्नातकोत्तर मेडिकल कलेजमा काम गरिन। त्यहाँबाट उनले आफ्नो डाक्टरेट अध्ययन पूरा गरिन। क्यारियरको अन्तिम दिनहरूमा, डा. जून अलामेडा वाल्कोम इन्स्टिच्यूटमा थिइन, जहाँ उनले इमेजिंग मार्फत धेरै नयाँ भा’इरसहरू पहिचान गरिन् र पेटेन्टहरू राखिन्। वाल्कोम संस्थानबाट सेवानिवृत्त भएपछि, डा. अलामेडा योग शिक्षक बनिन।
तर १९८० को दशकमा उनी एचआइभी भाइरसको नवीन फोटोहरू लिन संरक्षकका रूपमा बोलाइएको थियो। डा. जुन अलामेडाको २००७ मा मृ’त्यु भयो। उनी त्यस समयमा ७७ वर्षकी थिइन। उनको मृत्यु पछि १३ बर्ष पछि, उनलाइ एक बेजोड अनुसन्धानकर्ताको रूपमा याद गरिएको छ किनकि उनको अ’नुसन्धानले हाल विश्व’व्यापी को’रोना भा’इरस संक्रमणलाई बुझ्न थप मद्दत गरिरहेको छ।-बीबीसी
Previous लकडाउन : अ’ण्ड’को’षमा हा’नेर प्रहरीलाई बे’होस बनाएको कसैले किन देखेन ?
Next कोरोना भाइरस भन्दा भोकले मा’र्ने हो कि ?
बा’लिका ह’त्या प्र’करण : प्र’हरीको गो’ली ला’गेका संजयको मृ’त्यु !
16 mins ago kamal
44 mins ago kamal